६ तला माथिबाट खसे ३ वर्षका बालक तर कस्तो अचम्म! चोटपटक नै लागेन (भिडियोसहित) – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > ६ तला माथिबाट खसे ३ वर्षका बालक तर कस्तो अचम्म! चोटपटक नै लागेन (भिडियोसहित)
चीनको चोन्किङमा तीन वर्षीय एक बालक एउटा भवनको छैटौं तलाबाट खसेको भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनेको छ । छैटौं तलाबाट खसेपनि उनलाई केही भएन । प्रहरीका अनुसार घटना हुँदा उनी घरमा एक्लै थिए । एक जना प्रत्यक्षदर्शी महिला जु यानहुईले भनिन्,‘मैले एउटा बच्चा त्यहाँ माथि झुण्डिएको देखें । पहिला मलाई समाउन मिल्ने सामान खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । म खाली हातले उनलाई समाउन सक्दिनथें ।’
भवनमा बस्ने मानिस र कर्मचारीले ती बालकलाई एउटा ठूलो कम्बलमा थापे । सबै मानिसले माथिबाट खस्दै गरेको बच्चालाई हेर्दै कम्बललाई समाते । उनी माथिबाट खसे । र कम्बलमा परे । त्यसपछि एकजना छिमेकीले बच्चालाई अस्पताल लगे । ती तीनवर्षे बालकलाई कुनै चोटपटक भने लागेन ।
एकाबिहानै गएकाे पहिरो परि एउटै घरका ७ जना बेपत्ता